Sidee Loogu Guulaysan karaa Nolosha Cashar Micno Leh. | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Arimaha Bulshada » Sidee Loogu Guulaysan karaa Nolosha Cashar Micno Leh.
Sidee Loogu Guulaysan karaa Nolosha Cashar Micno Leh.
Waxaa Qoray: Cabdu Wahaab Axmed Cali /////////// Taariikh: 21-08-16 6:50 PM Waxa jira dad badan oo hanta iyo hodantinimada meel sare ka gaaray balse hubka guusha ayaa ah in aad leedahay han sare iyo hiigsi fog, sido kale waxaa jira dad badan oo aan haysan hanti balse haya hiyi iyo hami sare kuwaas oo sameyay fikir iyo qorshayaal fog oo mustaqbalka ah.
Ma doonaysa in aad noqoto hantiile balse aan heysan hanta la hubo oo muuqata, waxaan idin soo gudbinaynaa 5 waddo oo aad ugu fakari karto sida Hantiile.
5) had Iyo Jeer Yeelo Qorshe Mustaqbal Oo Fog
Tani ayaa ah mid kamid ah wadooyinka guusha ee qofkii sameya uu noqon karo hantiile iyo hami sare qof leh, waxaana ay sidoo kale udub dhaxaad u tahay guusha iyo gobnimada shaqsiga doonaya inuu meel sare gaaro.
4) U Fakar Naftaada Waxaan ku dhalanay kalinimo waxaan ku dhimanaynaa kalinimo, tan waa xaqiiqo dhab ah in aad noloshaad aad la sheekeysato si aad u gaarto guusha dhabta ah, waxayna kamid tahay wadooyinka aad ugu fakari karto sida hantiile han sare leh.
3) Wax Kabaro Qaladaadka Dadka Kale In badan oo inaga mid ah ayaa ka cabsada guuldarada, haa waa sax balse waa nuuc wanaagsan in laga cabsado guuldarada, balse tan ayaa kugu riixeysa in aad guuleeysato noloshaada, sidoo kale waxaad u baahan tahay in aad aqoon u yeelato naftaada iyo uumiyaha kale.
In aad ogaato qaladka dadka kale ayaa kaa saacidi kara in aad noqoto halyeey yar oo hantiile ah, sidaa darteeda waxaa u baahan tahay in aad yeelataa feejignaan xoogan.
2) Ha Daryeelin Waxay Dadka Ku Fakarayaan
Waxaa jira dad aad ubaadaan kuwaas oo fiiriya fikradaha dadyowga kale, marna masuuratagalayso inaad noqoto ruux kale cidna kuuma maqna.
Muhiimaadu waxay taahy inaad noqoto qofka aad tahay kuna dhaqaaqdo fikir cusub oo aad himiladadaa kugaadho si’aad ugu guulaysato nolasha. Hadaaba side ayaad kunoqon kartaa guulaystaha nolasha dhabta.
Waa inaad kufakartaa waxyaabo cusub oo aan dadku kufakaarayn oo adiga kuugaara si aad bulshada dhexdeeda ugu sheegnaatid.
Waxaa jira shiqsiyaad hiigsada dad iyga ka horeeya, hagaag maxuma balse kawarn qofka aad barilmaameed kadhigatay inuu halkiisa kuqanacsanyahay guushuu rabayna gaadhay ,
adiga intee ayaad usocotay markii hore, waaa xaqiiq inad isdhiganayso ileen ruuxa aad daaba socotay waa uu istaagay
Ha Ka Baqin In Aad Qaadato Fursadaada
Waxaa loobahanyahay inaad faraha darto fursadaada iyadoo si kasta u qadhaadh.
Tusaale: waxbaad soo lumisay ayaad dib uxasuusatay ha kaqoomamayn waayo waxaad haysataa fursad aad ku ilaawi karto ama aad kusixikarto wixii hore kaagaa lumay.
Markastaa wakhtigu waa mid hayaana shalay halkaad taagnayd manta mataagnid barina mataagnaantoodid, fuesad kasta waxay rabtaa akhristow inaad kafaa idaysato.